Wadooyinka Muqdisho oo dib loo furay kadib xayiraadii saarneed 24-kii saac ee ugu dambeysay – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Wadooyinka Muqdisho oo dib loo furay kadib xayiraadii saarneed 24-kii saac ee ugu dambeysay
Waxaa gelinkii dambe ee maanta dib loo furay dhamaan wadooyinka magaalada Muqdisho oo 24-kii saac ugu dambeeysay u xirnaa xafladda caleemo saarka ee madaxweynaha cusub dowladda federaaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo.
Ciidamada nabad-sugidda qaranka iyo kuwa militeriga dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dib u furay dhamaan wadooyinkaasi, kadib markii ay soo gaba-gaboowday xafladda caleemo saarka ee madaxweyne Farmaajo.
Wadooyinka Makka Al-mukarama, Wadnaha, Zoobe iyo Sodonka oo 24-kii saac ugu dambeysay xirnaa ayaa maanta waxaa lagu arkayaa gaadiidka kala duwan ee kuwa BL-ka iyo kuwa gaarka loo leeyahay oo wadooyinkaas isticmaalaya.
Sidoo kale, shacab badan ayaa maanta si is-daba joog ah u maraya wadooyinkaasi oo saacadihii ugu dambeysay u xirnaa arrimo amni awgeed.
Dhaq-dhaqaaqii ganacsi ee ka jiray dhamaan wadooyinkaasi ayaa dib usoo laabtay.
Dhinaca kale, madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo ayaa shacabka Muqdisho uga mahad-celiyay dulqaadka ay ka muujiyeen xirnaanshiyaha wadooyinkaasi arrimo amni awgeed, wuxuuna madaxweynaha sheegay inay ahayd mid lagu sugaayay ammaanka magaalada.